विपक्षी दलहरूबाट प्रोपोगान्डाको रूपमा सरकारबिरुद्ध प्रचार गरिएको छ : कल्पना पाण्डे लम्साल - Yugantar Khabar | News Portal
Posted on June 8, 2021 by Basanta Pariyar
लुम्बिनी प्रदेशको विभिन्न पक्षवारे २५ प्रश्नको उत्तर खाेज्दैछाै । हाम्रो प्रश्नको केन्द्रमा हुनुहुन्छ उद्योग बन तथा वातावरण मन्त्री माननीय कल्पना पाण्डे लम्साल ——————————————-
१) युगान्तर खबरमा मन्त्रीज्यूलाई स्वागत गर्दै आफ्नो परिचय आफैबाट – सुरु गरौं कि ?
म कल्पना पाण्डे । जनता समाजवादी पार्टीको निष्ठावान कार्यकर्ता हुँ । राजनीति मा अाउनुअगाडि १० बर्ष शिक्षक पेशामा अावद्द थिए । बिबाह पछि श्रीमान काे साथ र सहयाेगमा राजनीतिमा हाेमिएकाे हुँ । मेराे श्रीमान नवराज लम्साल पनि पार्टीको केन्द्रीय राजनीतिमा हुनुहुन्छ । हामी दुवैजना साथ- साथै राजनीतिमा छाैं ।
२) अहिले उद्योग बन तथा बाताबरण मन्त्री हुनुभएकाे छ कस्तो अनुभूति भएकाे छ ?
याे पार्टीले सुम्पेको एतिहासिक दायित्व हाे । मैले यसलाई अवसर र चुनाैतिकाे रूपमा लिएकाे छु । पार्टीको अग्रज नेतृत्वहरू संग सहकार्य गरेर अाफ्नाे जिम्मेवारीलाई ईमानदारीताकाे साथ पूरा गर्ने अठाेट लिएकाे छु । मलाई केही गरेर देखाउने हुटहुटि बीच अवसर प्राप्त भएकाे छ यसमा म खुसि छु । समय र पार्टी नेतृत्वले दिनुभएकाे याे अवसरलाई मुलुक र जनताकाे हितमा अधिकतम् उपयाेग गर्नेछु ।
३) प्रदेश सभा सदस्य हुँदाकाे अवस्था र अहिले मन्त्री हुँदा के अन्तर पाउनु भएकाे छ ?
प्रदेश सभा सदस्य हुदाँ पनि जनताकाे काममा निरन्तर लागेकाे नै हाे । हिजाे साधनस्रोत माग्न मन्त्री कहाँ जनताकाे समस्या लिएर जान्थे भने अहिले अाफै मन्त्री भएर साधनस्रोत बाँड्ने ठाउँमा पुगेकाे छु । हिजाे भन्दा अझबढि जिम्मेवारीवाेध भएकाे छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई सफल बनाउने र जनताकाे मुहारमा खुसिकाे संचार गराउने कार्यमा हरसम्भव प्रयत्न गर्ने छु । सबै माननीयहरू संग सहकार्य गरेर पार्टीको अग्रजहरू संग सुझाव लिएर अगाडि बढ्नेछु ।
४) यहाँले खासगरी बन र उद्योग दुईवटा क्षेत्रलाई हेर्नू परेकाे छ बढी महत्त्व कुन क्षेत्रलाई दिनुभएकाे छ ?
वच्चामा हामीले पढ्ने वेलामा हरियाे बन नेपालकाे धन भनेर पढेकाे हाे । अहिले ग्लाेवल वार्मिङ्काे कारण संसार असाध्यै असहज परिस्थितिमा छ यसलाई सुधार्न नयाँ कार्यक्रम लिएर अाउनुपर्ने चुनाैति छ । सिमित साधन श्राेतकाे वावजुध पनि हामीले जनताकाे जीवन स्तरमा परिवर्तन गर्ने गरि काम गर्नुपर्छ । भुकम्प पछि असहज बनेको उध्याेग झन काेभिड१९ काे कारण धरासायी बनेको छ यसलाई उठाउने जिम्मेवारी हाम्रो हाे । लुम्बिनी सरकारले प्राथमिकता काे अाधार तयार गरेर दुवै क्षेत्रलाई न्याय हुनेगरी कार्यक्रम अगाडि बढाउने याेजनामा छाै ।
५) अहिले लुम्बिनी प्रदेशमा उद्योगकाे अवस्था कस्तो छ ?
अहिले सम्पूर्ण मुलुकका उध्याेगहरू काे अवस्था असाध्यै जटिल भएकाे छ तथापि तुलनात्मक रूपमा लुम्बिनी प्रदेशको अवस्था अन्यत्र भन्दा खासै भिन्न छैन । हामीले उध्याेगलाई बिकासकाे मेरूदण्डकाे रूपमा स्विकार्दै असहजता भित्र सहजता खाेज्दै अगाडि बढ्नुकाे बिकल्प छैन । राज्य ले उध्याेगलाई साधनस्रोतले भ्यायसम्म खुलादिलले सहयाेग गर्छ । लुम्बिनी सरकार उध्याेगिहरूकाे साथसाथै छ ।
६) मुलुकमा गणतन्त्रकाे स्थापना भएकाे लामाे समय भईसक्दा पनि उद्योगकाे क्षेत्रमा खासै उपलब्धि भएकाे पाईदैन यहाँलाई यसकाे कारण के हाे जस्तो लाग्छ ?
हामीले साेचेअनुसार उपलब्धि हाँसिल गर्ने बाटाेमा निरन्तर लागेका छाै । सिमित साधनस्रोतकाे वीचमा पनि हामीले जुन उपलब्धि हाँसिल गर्दैथियाै त्यहि बिचमा भुईचालाे र काेभिड- १९ जस्तो बिश्वब्यापी महामारीको सिकार मुलुक बन्न पुग्याे यसकारण अलिकति सुस्ताएकाे अवस्य नै छ तर उध्याेग खत्तम नै भयाे । केही गरेन भन्ने अालाेचनाकाे पक्षमा म छैन । अब दुर्तगतिमा हामी सबैपक्ष संग हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नुकाे बिकल्प छैन । लक्ष्य प्राप्ति मा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ । हामी सक्छाै नतिजा हाम्रो पक्षमा ल्याउन हामी सफल हुन्छाै ।
७) उद्योग कलकारखानाकाे स्थापना र संस्थागत बिकासकाे निम्ति नयाँ कार्यक्रम के ल्याउने तयारी छ ?
हाम्रो सरकारले उध्याेग मैत्रि कार्यक्रम तर्जुमा गरेकाे छ । घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरू मार्फत धेरै भन्दा धेरै राेजगारी सृजना गर्ने, क्षेत्रगत असन्तुलन कम गर्दै जाने, एक क्षेत्र एक उद्योगिक ग्राम स्थापना काे कार्यक्रम राखिएकाे छ । याे प्रदेश लाई पञ्चिम नेपालकाे अाैधाैगिक हवकाे रूपमा बिकास गर्न केन्द्र सरकार संगकाे सहकार्यमा ठुलाे अाैध्याेगिक क्षेत्र र अाैध्याेगिक करिडोर निर्माण गर्न सरकार लागिपरेको छ । हामी छिटोभन्दा छिटाे लुम्बिनी प्रदेशलाई नमुना प्रदेशको रूपमा अगाडि ल्याउनेछाै ।
८) अर्थमन्त्रीकाे बार्षिक बजेट पछि चुरे क्षेत्र दाेहन हुनेभयाे भनेर निक्कै बिबाद सिर्जना भएकाे छ नी यसप्रति तपाईंको धारणा के छ ?
अर्थमन्त्रीकाे बार्षिक बजेटमा जुनकुरा अाएकाे छ । त्याे प्रति प्रदेश सरकार असाध्यै सचेत र सजग छ । चुरे क्षेत्रमा कुनैपनि प्रकारको क्षेयिकरण हुन दिईने छैन । विभिन्न ठाउँमा रहेका ढुङ्गा बालुवा लाई उत्खनन गरि त्यसको सहि सदुपयोग गरिनेछ । याे कार्य चुरेक्षेत्र भन्दा बाहिर रहेको खानीहरू बाट निश्चित मापदण्ड बनाएर मात्रै लागू गरिनेछ । यसले बाताबरण र पर्यावरणलाई कुनै असर हुन दिनु हुदैन भन्ने कुरामा सरकार असाध्यै सचेत छ ।
९) विपक्षी दलहरूले त चुरे क्षेत्रमा ढुङ्गा वालुवा उत्खनन गर्दा तराई क्षेत्रमा उत्पात नै मचिन्छ भन्दै छन् नी ?
विपक्षी दलहरूबाटअलि बढि नै प्रपाेगण्डाकाे रूपमा सरकार बिरूद्द प्रचार गरिएकाे छ जस्तो लाग्छ केही हदसम्म अालाेचनात्मक चिन्ता व्यक्त गर्नु त स्वभाविकै हाे । याे सकारात्मक नै हाे तर जसरी बिषयान्तर गरिएकाे छ । यसमा राजनीतिक राेटी सेक्ने काम भएकाे जस्तो लाग्छ । बिपक्षी ले जे भनेपनि सरकार याे बिषयमा असाध्यै गम्भीर छ । चुरेमा कुनैपनि प्रकारको अतिक्रम हुनेछैन । सबैले अनुगमन गर्नुभए हुन्छ निस्चित मापदण्ड बनाएर अन्यत्र खेर गएकाे सम्पत्तिलाई मुलुक काे बिकासकाे मुलधारमा समेटिने छ । तराईको संरक्षण नै सरकारकाे मुख्य दायित्व हाे सरकार त्यसलाई पूर्णरूपले पालना गर्न तत्पर छ ।
१०) चुरेकाे ढुङ्गा गिटी बालुवा बाहेक अाम्दानी गर्न सकिने अरू ठाउँ छैन र ?
हामी संग अाम्दानीकाे थुप्रै सम्भावना छ । चुरेकाे ढुङ्गा, गिटी र वालुवा सरकारले चलाउने छैन । यसलाई संरक्षण गर्न सरकार प्रतिवद्द छ । यी बाहेकको अन्य ठाउँमा भएकाे हाम्रो खानीहरूलाई संचालनमा ल्याएर त्यहाँको जनताकाे जीवन स्तर सुधार गर्न सरकार लागिपरेको छ । यसमा सबै नागरिक, विज्ञ, विभिन्न तह र समुदाय सबैकाे राेहवरमा कार्य गरिनेछ । बिराेधकाे लागि बिराेध गर्नुकाे खासै तुक छैन । हामी केन्द्रीय संघीय सरकारकाे याेजनालाई मूर्त रूप दिनेछौं साथसाथै चुरेक्षेत्रकाे संरक्षणमा कुनै कमि हुन दिने छैनाैं ।
११) वृक्षारोपण र बन संरक्षणकाे नयाँ याेजना के बनाउनु भएकाे छ ?
अन्य प्रदेशको बनकाे हैसियत भन्दा याे लुम्बिनी प्रदेश मा तुलनात्मक रूपमा बनकाे हैसियत अव्वल छ । म मन्त्रीकाे रूपमा अाएपछि बन ऐन भर्खरै सरकारबाट पास गराएकाे छु । वृक्षरोपण र बन संरक्षण काे बिबिध कार्यक्रमहरू ल्याएकाे छु । एक पालिका : एक नमुना कृषि बन कार्यक्रम संचालनमा ल्याउदैछु । बन बिउकाे गुणस्तर, बन बीउ बगैंचा वृक्षारोपण लगायतका कार्यक्रमहरू निर्धारण गरिएकाे छ ।
१२) अहिले पनि तस्करहरूले बन बिनास गरिरहेका छन् भन्ने सुनिन्छ नि ?
तस्करहरूले बन बिनास गरिरहेकाे भन्ने सन्दर्भमा बाहिर हल्ला गरिएकाे जस्तो भयावह अवस्था हैन तर कहि कतै चुहावट भैरहेको हुन सक्छ । हामी यसलाई डिजिटल प्रबिधिमार्फत निगरानी गर्ने याेजनामा छाै । चाेरी निकासी लगायतका अवैध कृयाकलाप राेकथाममा हामी कठाेर बन्दैछाै । अब चुहावट कुनैपनि हालतमा राेकिनुपर्छ । हाम्रो मन्त्रालयकाे सबैको ध्यान त्यसतर्फ केन्द्रीकृत छ ।
१३) हामी संग यति ठुलाे बन सम्पदा छ तर राज्यले यसबाट लिने प्रतिफल निकै कम देखिन्छ यसबारे तपाईं कति सचेत हुनुहुन्छ ?
हामी बन सम्पदाको बहुअायामिक रूपले उपयोग गर्नेछाै । पर्यापर्यटनका कृयाकलापहरू संचालन गरिनेछ । उपभोक्ता समूह, निजिक्षेत्र, सराेकारवालाकाे सहकार्यमा बन सम्पदाको अभिवृद्धि, बनजन्य कच्चापदार्थमा अाधारित उद्योगहरू संचालन गरि यसलाई बढि भन्दा बढि प्रतिफलमुखि कार्यक्रम संचालन गरि अायस्राेतकाे साथसाथै राेजगारिकाे सृजना गरिनेछ ।
१४) बन क्षेत्रमा बर्षाैं देखि ढलेका बहुमुल्य काठमा डडेलाे लाग्ने गर्छ तर निकासी गरेर राज्यको अाम्दानी लिन खाेजिदैन किन ?
बनक्षेत्रमा ढलेका काठहरूलाई प्रचलित कानुनको अधिनमा रहि यसलाई संकलन, व्यवस्थापन र बिक्री बितरण सराेकारवालाहरू संगकाे सहकार्यमा गरिनेछ । यसलाई राज्यको अाम्दानीकाे श्राेतकाे रूपमा परिचालन गरिनेछ । अब उप्रान्त डडेलाेबाट ढलेकाे काठ बिनास हुने अवस्था अन्त्यको लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकार प्रतिवद्द छ ।
१५) बैज्ञानिक बन व्यवस्थापन बारे के हुदैछ ?
संघीय सरकारले बैज्ञानिक बनलाई खारेज गरेको अवस्था छ । केन्द्र काे निर्देशन अनुसार नै यसलाई नयाँ व्यवस्था गरिनेछ ।
१६)चुरे क्षेत्र संरक्षणकाे निम्ति के प्रयास गर्नुभएकाे छ ?
चुरे संरक्षणको निम्ति प्रदेश सरकार प्रतिवद्द छ । चुरे क्षेत्रमा एकीकृत संरक्षण याेजना, सचेतना मुलक कार्यक्रम, वृक्षारोपण, अनुगमन सहित राष्ट्रपति चुरे संरक्षण समिति संगकाे सहकार्यमा बिबिध कार्यक्रमहरू संचालन गरिनेछ ।
१७) जनता समाजवादी पार्टी करीव करीव फुटकाे संघारमा पुगेको छ यसकाे मुख्य कारण के हाे ?
जनता समाजवादी पार्टी भित्र विभिन्न बिचारकाे समिश्रण छ । विविधता भित्रकाे एकता र एकता भित्र पनि बिचार निति र सिद्धान्तको बहस जीवन्त पार्टी भित्र हुन्छ । पछिल्लो समय पार्टीमा केहि बिचलन देखिएकाे छ । बिशेश गरि उपेन्द्र जिहरू मधेसीको मागमा अाफु सत्तामा रहेको बेलामा केही गर्न नसकेको र हाम्रो श्रद्धेय अध्यक्ष महन्थ ठाकुर लगायतकाे नेतृत्वमा वार्ता टाेली सदस्यदय हाम्रो नेता सर्वेन्द्र सुक्ला जि र लक्ष्छुमणलाल कर्ण जि काे टाेलीले भट्टाभट सरकार संग वार्ता गरेर माग पूरा गरिदिन थाल्नुभएपछि उपेन्द्र जि हरू तिलमिलाउनु भएकाे छ । पार्टी नेतृत्व सफलहुदा खुसि हुनुपर्ने ठाउँमा उहाँहरू जसरी अात्तिनुभएकाे छ । त्याे अाफैमा उदेकलाग्दो बिषय बनेकाे छ । मधेसी जनताले नजिक बाट याे छलछामकारी कार्यकाे अनुभुति गरिरहनुभएकाे छ । बाहिर जुन प्रकारको हल्ला चलेको छ त्याे केही हदसम्म सत्य हाे तर पार्टी फुटिसक्याे भन्नू चाहिँ अलि हताराे नै हाेला ।
१८) यहाँ लगायतका केहि सांसदहरूलाई पार्टीले निष्कासन गरेर सांसद पद बाट नै हटाएकाे थियाे अहिले अदालतले पुनर्वाहालि गरेको छ यसबारे केही वताइ दिनुहोस् न ?
म लगायतका केही संसदलाई उपेन्द्र जि र ईस्तियाक जिले षड्यन्त्रपूर्ण ढंगबाट पार्टी कारवाहि गराएका थिए तर हामीलाई महन्थ जि लगायतकाे पहलकदमीमा सम्मानित सर्वाेच्च अदालतले स्ट्रे अडर गरेर न्याय गरेको छ । मलाई बिस्वास छ । जित हाम्राे नै हुनेछ किन भने हामीले पार्टी केन्द्रलाई २ महिना अगाडि नै प्रदेश संसदीय दलकाे बैठक बसि पार्टी का बिधायकहरूले सरकार काे सन्दर्भमा के गर्ने ? वर्तमान सरकारलाई सहयाेग गर्ने ? या अविस्वासमा हस्ताक्षर गर्ने ? या ततस्थ बस्ने निर्णय गरिपाउ भनी पठाएकाेमा कुनै प्रकारको निर्णय नअाएकाे ? पुस ७ गतेपछि केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिकाे बैठक नवसेकाे र पूर्व राजपा र सपा काे केन्द्रमा एकीकरण भएकाे भएपनि प्रदेश कमिटी एकीकरण हुन नसकेकाे अवस्थामा उपेन्द्र जि हरूले जसरी कथित प्रदेश कमिटी काे हवला दिएर कार्वाही गरेकाे भनेर सभामुख संग सेटिङ गरेर जालझेल र षड्यन्त्र मुलक ढंगले काम गर्नुभयाे त्यसलाई सर्वाेच्च अदालतले जवाफ दिई नै सकेकाे छ । अदालतले हेरिरहेको बिषय भएकाेले यसमा धेरै टिप्पणी गर्नुकाे अर्थ छैन तर हामी ६६% संसदहरूकाे सहभागीतामा दलकाे बिधान अनुरूप दलकाे नेता परिवर्तन गरेर सरकारमा जाने निर्णय गरेर गएकाेले कारवाहि काे जुन नाैटङ्कि गरियाे त्याे अाफैमा हास्यास्पद थियाे । नाटक थियाे ।
१९) पार्टीमा बिबाद हुनेगरी किन मन्त्री खान जानू भयाे ?
पार्टीको विवाद भनेको उपेन्द्र जि र ईस्तियाक जि काे अाफु बाहेक अरू केही भएकाे देखि नसक्ने स्वभाव काे कारण सृजित समस्या हाे । हामी जनताकाे सवककाे रूपमा छाै र रहनेछाै । हामीले जनजिविका काे उथ्थान गर्न मन्त्री भएका हाै । हामीले मन, वचन र कर्मले नै एकतावद्द भएर जनताकाे सुखदुःख मा हातेमालाे गरेका छाै । मन्त्री भएर साधनस्रोत मा थप पहुच पुञ्याउन र जनताकाे सेवा गरि देश निर्माण मा एउटा ईट्टा थप्नकाे लागि अगाडि बढेका छाै । हाम्रो कारणले गर्दा पार्टीमा केही समस्या उत्पन्न नहाेस भनेर हामी सचेत भएका छाै ।
२०) अब पार्टी पुनः एकढिक्का भएर जानसक्ने कुनै संभावना देख्नु भएकाे छ ?
हाम्रो पार्टी एकतावद्द छ पाकेका केही थान अाँपहरू झर्न सक्छन् तर रूख कदापि झर्दैन । जसपा हाम्रो पार्टी हाे । याे पार्टीको नेतृत्व महन्थ, राजेन्द्र, सर्वेन्द्र र लक्ष्छुमणलाल कर्ण लगायतकाे नेतृत्व गणले गर्नुहुनेछ । हामी उहाँहरूकाे नेता कार्यकर्ता काे हैसियतले सदैव पार्टी प्रति ईमानदार छाै र रहिरहनेछाै ।
२१) प्रसङ्ग बदलाैं एउटा पुरूष मन्त्री र महिला मन्त्री बीच कुनै भिन्नता देख्नु भएकाे छ ?
महिला मन्त्री र पुरूष मन्त्री मा त्यतिधेरै मत भिन्नता त छैन नै तै पनि कर्मचारीहरू अलि वढि महिला मन्त्री प्रति अनुदार भएकाे हाे कि जस्तो महशुस भएकाे छ । पुरूषहरू मात्रै जान्ने सुन्ने र निर्णय क्षमता भएकाे ठान्ने मनाेबिज्ञान अलि वढि हावी भएकाे जस्तो तिताे अनुभव संगालेकाे छु तर पनि महिला पनि अवसर अाउदा जस्तो सुकै भुमिकामा पनि सफल हुन भन्ने प्रमाणित गर्नकाे लागि मेराे श्रीमान् काे महिला प्रतिकाे बुझाई र मेराे लगनसिलताले मैले प्राप्त गरेकाे अवसर नै काफि छ र हुनेछ भन्ने मेराे बिस्वास हाे ।
२२) एउटी अामा, बुहारी, छाेरी, गृहणि हुँदै मन्त्री सम्मकाे जिम्मेवारी समाल्नु भएकाे छ समयकाे व्यवस्थापन कसरी गर्नु हुन्छ ?
तपाईंले सहि भन्नुभयाे मैले बुहारी, श्रीमती, अामा, भाउजू सवै प्रकारको भुमिका संगै याे देशकाे मन्त्रीको भुमिका पनि निर्वाह गरेकाे छु । समयलाई म्यानेज गरेकाे छु । अाज पनि म मेराे छाेरीलाई अाफै बसेर खाना खुवाउछु । घरपरिवार काे लागि साेचे जति समय दिन नसके पनि यथा सम्भव समय दिएकाे छु ।
२३) मन्त्रालयकाे काममा कर्मचारी लगायत सराेकारवालाकाे सहयाेग कस्तो पाउनुभएकाे छ ?
मन्त्रालय मा सबै कर्मचारी साथीहरूले कर्तव्यनिष्ट भएर काम गरेका छन् । म संसदकाे रूपमा ३ बर्ष रहेकाेले अधिकांश कर्मचारीले मेराे स्वभाव अध्ययन गर्नुभएकाे थियाे । म संसदमा पनि जनताकाे सवाल उठाउने र निर्णय गर्न पहलकदमी लिने सवालमा अग्रमाेर्चामा नै थिए त्यसकारण सबैलाई कल्पना मन्त्री ज्यु संग काम गर्दा छुट्टै उर्जा अाउछ भन्नुहुन्छ अहिले सम्म असाध्यै सहयाेग पाएकाेछु अाशा छ अागामी दिनमा पनि अवस्य नै प्रतिफलमुखि काम गर्न कर्मचारीतन्त्रकाे पूर्ण सहयाेग हुनेछ ।
२४. प्रदेश सरकार अल्पमतमा पर्याे मुख्यमन्त्रीले राजिनामा दिनुपर्छ भनेर बिपक्षीले अावाज उठाएका छन् नी ?
याे बिपक्षीहरूले लगाएकाे कपाेकल्पित तथ्यहिन अाराेप मात्रै हाे याे सरकार पूर्ण बहुमतकाे सरकार हाे । संसदमा रहेकाे सदस्य संख्याकाे पूर्ण बहुमत छ । अल्पमत कसरी हुन्छ ? तपाईं अाफै वताउनुहाेस त मलाई ? वर्तमान मुख्य मन्त्री श्रद्धेय शंकर पाेखरेलकाे नेतृत्वमा चुनाव सम्म याे सरकार टिक्छ । हाम्रो जनता समाजवादी पार्टीले केन्द्रमा पनि सहकार्य गरेको छ प्रदेश मा पनि हामीले सहकार्य गरेका छाै । हाम्रो लुम्बिनी जनताकाे जनजिविका हल गर्ने र प्रधानमन्त्री काे सपना सुखि नेपाली जनता संमृध नेपाल निमार्ण काे अभियानमा हामी हरतवरले साथ सहयाेग र सहयात्रा गर्न तत्पर छाै । तुलनात्मक रूपमा अन्य प्रदेश मा भन्दा याे प्रदेश नमुना प्रदेशको रूपमा अगाडि बढेको छ । जनतालाई याे सरकार जनताकाे अाफ्नै प्रिय सरकारकाे रूपमा बिस्वास दिलाउन हामी लागि परेका छाै । हाम्रो टिम असाध्यै मेहनेती टिम छ । हामी याे देशलाई बिकासकाे माध्यमबाट एउटा सफल देश वनाउनेछाै ।
२५) अरू केही भन्नू छ कि मन्त्री ज्युु ?
सबै नेपाली जनतालाई धन्यवाद भन्न चहान्छु । मलाई बिस्वास गरेर मन्त्रीकाे लागि सिफारिस गर्ने पार्टी नेतृत्वगण, हाम्रो अभिभावक पूर्व मन्त्री सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला ज्यु, प्रदेश कमिटी काे साथिहरू लगायत पत्रकारवन्धुहरू लगायत सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई धन्यवाद चाहन्छु । याे अन्तर्वार्ता लिएर मेराे कुरा जनता सामु पुर्याउने अवसर दिनुभएकाेमा तपाईलाई पनि विशेष धन्यवाद भन्न चाहन्छु । धन्यवाद ।